Ubusika basebusika | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Ciencia, Ukwahlukanisa
Iplanethi yoMhlaba izungeza inkanyezi yethu, iLanga. Endleleni yayo idlula amabanga ehlukene maqondana nayo. Lapho ifinyelela ubusika bosuku iyavuma ukuthi wusuku olufushane kakhulu nobusuku obude kunabo bonke enyakatho yezwe futhi ngakolunye uhlangothi eningizimu yezwe. Lolu suku luvamisile Disemba 21.
I-solstice yasebusika ngumcimbi obalulekile okhombisa ushintsho kumjikelezo wemvelo nowezinkanyezi. Kusukela ku-solstice yasebusika, enyakatho ye-hemisphere ubusuku buqala ukuncipha kancane kancane kuze kufike i-solstice yasehlobo ngoJuni.
1 Kwenzekani ku-solstice yasebusika?
2 Isikhathi sasebusika namasiko
2.1 Umbuthano kaGoseck
2.2 UStonehenge, eGreat Britain
2.3 ENewgrange, e-Ireland
2.4 ITulum, eMexico
3 Kungani usuku lwasebusika lolo suku lushintsha unyaka nonyaka?
4 Isikhathi sasebusika nokuguquka kwesimo sezulu
Kwenzekani ku-solstice yasebusika?
IPlanethi yoMhlaba ifinyelela iphuzu elisendleleni yayo lapho imisebe yeLanga ishaya khona ebusweni ngendlela efanayo oblique ngaphezulu. Lokhu kwenzeka ngoba uMhlaba uthambekele kakhulu futhi imisebe yeLanga ayinakufika ngokungafani. Lokhu kubangela amahora ambalwa okukhanya kwelanga, okwenza kube usuku olufushane kakhulu onyakeni.
Kunombono omubi emphakathini wonkana mayelana nobusika nehlobo ngokusho kwebanga ukusuka eMhlabeni kuye eLangeni. Kuyaqondakala ukuthi ehlobo kuyashisa ngoba uMhlaba useduze neLanga kanti ebusika kubanda ngoba thina sithola kude. Indlela yoMhlaba ezungeze iLanga eyaziwa ngokuthi ukuhumusha inomumo okweqanda. Ngama-equinox entwasahlobo nasebusika, uMhlaba nelanga ebangeni elifanayo nasekuthambekeni okufanayo. Kodwa-ke, ngokungafani nenkolelo evamile, uMhlaba useduze neLanga ebusika futhi uya kude ehlobo. Kungenzeka kanjani-ke ukuthi sibe sebanda kakhulu ebusika?
Ngaphezu kwesikhundla somhlaba maqondana neLanga, yini ethonya amazinga okushisa kweplanethi ukutsheka lapho imisebe yelanga ishaya ngayo. Ebusika, eSolstice, uMhlaba useduzane neLanga, kepha ukutsheka kwawo kuphakeme kakhulu eNyakatho Nenkabazwe. Ngalesi sizathu, lapho imisebe ifinyelela ebusweni bomhlaba ithambekele kakhulu, usuku lufushane futhi futhi lubuthakathaka, ngakho-ke awawushisi kakhulu umoya futhi uyabanda. Eningizimu Nenkabazwe kwenzeka okuphambene nalokho. Imisebe ishaya ebusweni bomhlaba ngendlela ebheke ngokwengeziwe futhi eqondile ukuze kubo, ngoDisemba 21, ihlobo liqale. Lesi simo soMhlaba maqondana neLanga siyabizwa I-Perihelion.
I-Perihelion ne-aphelion. Umjikelezo womhlaba.
Ngakolunye uhlangothi, ehlobo, uMhlaba ungukude kakhulu kuneLanga kuyo yonke indlela yawo. Kodwa-ke, ukuthambekela enyakatho Nenkabazwe kwenza imisebe yeLanga iwele ngokungaphezulu enyakatho Nenkabazwe ngakho-ke iyashisa futhi izinsuku zinde. Lesi simo soMhlaba maqondana neLanga siyabizwa I-Aphelion.
Isikhathi sasebusika namasiko
Kuwo wonke umlando, abantu baye bagubha i-solstice ebusika. Kwamanye amasiko, ukuqala konyaka kunguDisemba 21, okuqondana nokuqala kobusika. Ezinye izizwe zase-Indo-European nazo bezinemikhosi namasiko okugubha lolu suku. AmaRoma ayegubha ISaturnalia, behlonipha unkulunkulu ongaziwa, futhi ezinsukwini ezalandela bahlonipha UMithra, ukuhlonipha unkulunkulu wokukhanya ozuzwe njengefa kumaPheresiya.
Kumasiko amadala, i-solstice yasebusika imele ukunqoba kokukhanya ngokumelene nobumnyama. Kuyathakazelisa ukuthi lokhu kunjalo lapho kunamahora ambalwa okukhanya ebusika. Kodwa-ke, lokhu kunjalo ngoba kusukela ku-solstice yasebusika, ubusuku buzoba bufushane futhi bube bufushane, imini izobunqoba ubusuku.
I-solstice yasebusika futhi iveza imikhosi eminingi yobuqaba nemikhuba. UDisemba 21 wagujwa ku- Stonehenge ngoba iLanga le-solstice yasebusika lihambisana namadwala abaluleke kakhulu alesi sikhumbuzo. Namuhla eGuatemala, i-solstice yasebusika isagubha ngomkhuba we "Umdanso wamapheshana". Lo mdanso uqukethe abantu abaningana abaphenduka badansa bezungeza isigxobo.
Lo mbuthano utholakala eJalimane eSaxony-Anhalt. Siqukethe uchungechunge lwamasongo agxilile abethelwe emhlabathini. Kulinganiselwa ukuthi, ngokusho kwabavubukuli nezazi-mlando ezizungezile Iminyaka engu-7.000 ubudala nokuthi kwakuyisigcawu semikhuba yenkolo nemihlatshelo. Lapho bekuthola, babona ukuthi kuneminyango emibili kumbuthano ongaphandle owawuhambisana ne-solstice yasebusika. Kungakho lokhu kuphakamisa ukuthi ukwakhiwa kwayo kungenxa yohlobo lwentela kuze kube yilolu suku lonyaka.
UStonehenge, eGreat Britain
Njengoba sishilo phambilini, ubusika benjabulo babuye babungazwa e-Stonehenge ngenxa yokuthi imisebe yelanga ihambisana ne-altare elisenkabeni netshe lomhlatshelo. Lesi sikhumbuzo sinezinto mayelana Iminyaka engu-5.000 XNUMX ubudala futhi kuyaziwa ezindaweni eziningi zomhlaba, kuyisimo esibalulekile samasiko nokubhekwa kwezinkanyezi amakhulu eminyaka.
Kunendunduma eyakhiwe Iminyaka engu-5.000 edlule embozwe ngotshani futhi emgqonyeni wemigudu nemisele enyakatho empumalanga ye-Ireland. Ngosuku lwe-solstice yasebusika kuphela lapho iLanga lingena kuwo wonke amakamelo amakhulu, okusho ngokwezinye izazi ukuthi lesi sakhiwo sakhiwa ukukhumbula lolu suku.
Ogwini olusempumalanga yeMexico, eNhlonhlweni Yucatan, iTulum yidolobha lasendulo elibiyelwe ngezindonga elalingamaMeya. Esinye sezakhiwo ezakhiwe lapho sinembobo phezulu edala umthelela lapho usuku lwasebusika nolwasehlobo luhambisana nalo. Lesi sakhiwo sahlala singaguquki kwaze kwawa abantu baseMayan lapho kufika abaseSpain.
Kungani usuku lwasebusika lolo suku lushintsha unyaka nonyaka?
Usuku oluqala ubusika lungenzeka ngezinsuku ezahlukahlukene, kepha njalo ezinsukwini ezifanayo. Izinsuku ezine lapho kungenzeka ngalo ziphakathi Disemba 20 no-23, kokubili okubandakanya. Lokhu kungenxa yendlela okulandelana ngayo iminyaka ngokuya ngekhalenda esinalo. Kuya ngokuthi unyaka ungunyaka weqa noma cha futhi kuya ngobude bomjikelezo ngamunye woMhlaba ozungeze iLanga. Lapho uMhlaba wenza inguquko ngqo ezungeze iLanga waziwa njengonyaka we-tropic.
Kuwo wonke ama-XNUMXst century, ubusika buzoqala ngezinsuku kusuka ngoDisemba 20 kuya ku-22.
Isikhathi sasebusika nokuguquka kwesimo sezulu
Ukwehluka kwemvelo komjikelezo woMhlaba, kufaka phakathi lawo ahlobene ne- precession, usabalalise, ngokuhamba kwesikhathi, isigameko semisebe yelanga emhlabeni.
Ukuhamba phambili noma umqulu womhlabathi ukunyakaza okuzungezayo okwenziwa yi-eksisi yoMhlaba. I-eksisi ichaza indingilizi engacabangi esikhaleni futhi ilandele inguquko njalo ngeminyaka emi-22.000. Ngabe lokhu kuhlangene ngani nokufudumala komhlaba kanye nokuguquka kwesimo sezulu?
Ukubikezela koMhlaba. Umthombo :: http://www.teinteresasaber.com/2011/04/cuales-son-los-movimientos-de-la-tierra.html
Kule minyaka eyizigidi ezedlule, lokhu kwehluka okucashile ku-eksisi yoMhlaba kudale ukwehla okuphawulekayo nokwanda kokugxila komkhathi i-methane ne-carbon dioxide. Kuyaziwa ukuthi ukugxilwa kwegesi ebamba ukushisa kuphendula ikakhulukazi ekwehlukaneni ngesikhathi sehlobo lesibungu sehlobo, okungukuthi, isikhathi sonyaka lapho isigxobo esisenyakatho sikhomba khona iLanga.
Ukushisa kwehlobo enyakatho Nenkabazwe kufinyelela phezulu kanye njalo eminyakeni engama-22.000, lapho ihlobo elisenyakatho liqondana nokudlula koMhlaba endaweni esondelene kakhulu neLanga kanye ne-hemisphere esenyakatho ithola imisebe yelanga enamandla kakhulu.
Ngokuphambene nalokho, ukushisa kwehlobo kufinyelela ubuncane bayo eminyakeni eyi-11.000 kamuva, lapho i-eksisi yomhlaba isiphendukile yaba nokuma okuphambene. I-hemisphere esenyakatho lapho-ke izoba nemisebe encane yelanga ehlobo ngoba umhlaba usesimweni kude nelanga.
Ukugxilwa kwe-Methane ne-carbon dioxide kukhuphuke kwawa ngokuhambisana nezinguquko ezenzakalweni zemisebe yelanga emhlabeni wonke iminyaka engama-250.000 edlule.
Ngesikhathi solstice sasebusika imisebe yelanga ishaya ngamandla.
Njalo eminyakeni eyi-11.000 kune-solstice yasebusika eyi kufudumele njengoba lesi sigameko imisebe yelanga enyakatho Nenkabazwe inkulu futhi, kunalokho, kunenye intaba yasebusika lapho kuqedwa ithanga lesibikezelo, okuyi kubanda kusukela imisebe yeLanga ifika ithambekele ngokwengeziwe. Kuthiwa ukugxila kwegesi ebamba ukushisa kuyanda ngokwemvelo ngoba sisondela esikhathini sokuqala lapho iplanethi ithola khona imisebe yelanga ethe xaxa, kepha sazi kahle, ukuthi ngokwemvelo, bekungeke kwandise kakhulu Kungenxa yemisebenzi yabantu ukuthi amazinga okushisa aphakathi komhlaba anda kakhulu.
Ngakho konke lokhu ungazi okuthe xaxa mayelana ne-solstice yasebusika nokubaluleka kwayo emasikweni omhlaba nakuwo wonke umlando.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Isikhathi sasebusika
Ezinye izinhlobo zisongelwa kakhulu ukuguquka kwesimo sezulu